LG G3 ကို Android 7.1.2 (နိုင်ငံတကာပုံစံ D855) သို့မွမ်းမံနည်း Androidsis
ကျနော်တို့လက်တွေ့ကျတဲ့သင်ခန်းစာနဲ့အတူပြန်လာပြီ၊ ဒီအချိန်မှာငါက Android သင်ခန်းစာအဟောင်းကိုဒုတိယအခွင့်အရေးပေးမယ်။ LG G3 ကို Android 7.1.2 သို့အဆင့်မြှင့်ပါ တရားမဝင်တစ် ဦး ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်း Remix Team Rom.
ဒီပို့စ်ရဲ့အစမှာသင့်ကိုထားခဲ့တဲ့လက်တွေ့ဗီဒီယိုသင်ခန်းစာကိုလိုက်နာဖို့သင်လိုအပ်တာအားလုံးကိုအောက်မှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်။ လိုအပ်သောဖိုင်များအားလုံးကို download လုပ်ရန်လင့်များ နှင့်ရုပ်ရှင်ထဲတွင်ဤအချက်မှာ၎င်းတို့၏အမြစ်တွယ်မရကြဘူးသောသူအပေါငျးတို့အနည်းငယ်အသုံးပြုသူများအတွက်လင့်များပင် LG က G3 နှင့် TWRP Recovery ကို၎င်း၏နောက်ဆုံးရရှိနိုင်ဗားရှင်း၌တည်၏။ ဒီတော့ tutorial နဲ့စကြရအောင် !!
1 LG G3 ကို Android 7.1.2 သို့အဆင့်မြှင့်တင်ရန်လိုအပ်သောလိုအပ်ချက်များ
2 LG G3 ကို Android 7.1.2 သို့အဆင့်မြှင့်တင်ရန်လိုအပ်သောဖိုင်များ (International model D855 only)
2.1 Flashify ကို Google Play စတိုးမှအခမဲ့ရယူပါ
3 Rom နှင့်လိုအပ်သောဖိုင်များကို flash လုပ်နည်း
LG G3 ကို Android 7.1.2 သို့အဆင့်မြှင့်တင်ရန်လိုအပ်သောလိုအပ်ချက်များ
လူအပေါင်းတို့၏ပထမ ဦး ဆုံးတစ် ဦး ရှိသည်ဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် Terminal အမြစ်တွယ်ပြီး TWRP ပြန်လည်ထူထောင်ခြင်း၏ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်အတူ။ ထိုအခါငါ terminal ကိုအဲဒီအခြိနျမှာ install လုပ်ခဲ့၏ Android ဗားရှင်းထည့်သွင်းစဉ်းစား LG G3, မော်ဒယ် D855 Root ရရန်ကွဲပြားခြားနားသောသင်ခန်းစာများမှ link တစ်ခုထားခဲ့ပါ:
ယင်းတို TWRP Recovery သည်နောက်ဆုံးဗားရှင်းသို့အဆင့်မြှင့်တင်သည် Flashify application ကို အသုံးပြု၍ ပူးတွဲပါဗွီဒီယိုတွင်ကျွန်တော်ပြသသကဲ့သို့သင်အနည်းငယ်ကို download လုပ်နိုင်သည်။
LG G3 ကို Android 7.1.2 သို့အဆင့်မြှင့်တင်ရန်လိုအပ်သောဖိုင်များ (International model D855 only)
ပထမဆုံးလုပ်မှာက Flashify ကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲပြီးပြုပြင်ထားသော TWRP Recovery ကို၎င်း၏နောက်ဆုံးရဗားရှင်းသို့အပ်ဒိတ်လုပ်ပါ ဒီ link ကနေ image file ကို download လုပ်ပါ နှင့်ဤပို့စ်ရဲ့ထိပ်မှာဗီဒီယိုထဲမှာငါညွှန်ပြသောခြေလှမ်းများကိုလိုက်နာ။
Flashify ကို Google Play စတိုးမှအခမဲ့ရယူပါ
ယခုကျွန်ုပ်တို့သည်ဖိုင်များမှဖိုင်များကိုသာဒေါင်းလုတ်လုပ်ရမှာဖြစ်သည် Rom ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်း Remix 7.1.2, အ ရေဒီယို 21C ARM ဗားရှင်းအတွက် Android 7.1 အတွက်မူလ Google applications များ
ဒီကနေ 21C ရေဒီယိုကို download လုပ်ပါ။
Android 7.1 အတွက်မူလ Google apps များကိုဤနေရာမှရယူပါ။
ဤ link မှ LG G7.1.2 အတွက် Rom Resurrection Remix Android3ကို download လုပ်ပါ.
compressed ဖိုင်သုံးခုကို zip ဖြင့်ကူးယူသည်။ terminal သို့မဟုတ်၏အတွင်းပိုင်းသို့မဟုတ်ပြင်ပမှတ်ဉာဏ်ထဲမှာ decompressing မပါဘဲ ငါအောက်တွင်ငါအသေးစိတ်ပါလိမ့်မယ်ခြေလှမ်းများကိုလိုက်နာပါ။
Rom နှင့်လိုအပ်သောဖိုင်များကို flash လုပ်နည်း
ကျနော်တို့ Recovery mode မှာပြန်လည်စတင်ရန် ငါပူးတွဲဗွီဒီယိုတွင်ပြသသကဲ့သို့ငါတို့သည်စာကိုဤအဆင့်များလိုက်နာ:
Wipe or clean option ကိုသွားပြီးအဆင့်မြင့်သန့်ရှင်းရေးကိုနှိပ်ပါ။ ထို့နောက် Dalvik, cache, data, system နှင့်ရွေးစရာရှိသည့်ဖိုင်များကိုပြင်ပမှတ်ဉာဏ်ကဒ်ပေါ်တွင် flash လုပ်ရန်လိုလျှင်သွားပါ။ Rom ကို SDcard မှထည့်သွင်းနေတယ်ဆိုရင်၊ Internal Memory option ကိုလည်းမှတ်သားသင့်သည်။ သို့သော် အကယ်၍ သင်သည် Rom ကိုပြင်ပတွင်တပ်ဆင်ထားမှသာဤသို့ထပ်မံပြောဆိုသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤ Wipes ကိုအနည်းဆုံးသုံးကြိမ်လုပ်ရမည်။
ယခုတွင် Install option သို့ သွား၍ 21C radio သို့မဟုတ် modem ကိုရွေးပြီး flash လုပ်ပါ။
ကျွန်ုပ်တို့သည် Install ရွေးချယ်ခြင်းကိုဆက်လက်လုပ်ဆောင်ပြီးရင်းရင်းနှီးနှီးဂူဂဲလ်အက်ပလီကေးရှင်းများကိုထည့်သွင်းပါ။
Rom နှင့် Zip ဖိုင်ကိုရွေးချယ်ပြီး၎င်းကိုတပ်ဆင်ခြင်းကိုအဆုံးသတ်ရန် Install ကိုကျွန်ုပ်တို့ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် Reboot option ကိုရွေးသည်။ သို့သော်ဤကိစ္စတွင်လုပ်ဆောင်မှုကိုလုပ်ဆောင်ရန်ဘားကိုကျွန်ုပ်တို့မရွှေ့ပါ။ သို့သော်အနည်းငယ်ပိုမြင့်သောခလုတ်ကိုသာနှိပ်ပါ။
Rom ကိုပထမဆုံးအကြိမ်ဖွင့်ရန်ငါးမိနစ်မှဆယ်မိနစ်အကြာစောင့်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ LG G3 ကို Android 7.1.2 သို့အဆင့်မြှင့်တင်ပြီးဖြစ်သည် တရားမဝင် ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်း Remix အဖွဲ့ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » လဲ tutorial » ရွမ် » LG G3 ကို Android 7.1.2 (နိုင်ငံတကာပုံစံ D855) သို့မွမ်းမံနည်း။
andres castañeda ဟုသူကပြောသည်
klebbere ramires ဟုသူကပြောသည်
ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်၏ samsumg GT-P5100 ဘုတ်ကို S /0Nouget 7.1.2 သို့အဆင့်မြှင့်တင်နိုင်မလား၊ ကျေးဇူးပြု၍ tutorial တစ်ခုကျေးဇူးရှိပါက ကျေးဇူးပြု၍ သိလိုပါသည်။
klebbere ramires သို့ပြန်သွားပါ
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်သည် LG g3 ကို root မလုပ်ခဲ့ပါ။ တရားဝင် LG update ဖြင့်ကျွန်ုပ်သည် Android ၏ version 6.0 သို့ရောက်သွားပြီး marsmallow root တွင်ပိုလန် 6.0 နှင့် ပတ်သက်၍ တစ်ခုခုပြောပါသည်။ ကျွန်ုပ်မေးခွန်းကပိုလန် ၆.၀ မပါဘဲ root ကိုရနိုင်မလားဆိုသည့်အချက်မှာကျေးဇူးတင်ပါသည်။ လေးစားစွာဖြင့်
မင်္ဂလာနံနက်ခင်းပါ။ ဗီဒီယိုကိုဂုဏ်ယူပါတယ်။ အရာရာတိုင်းဟာကျွန်တော့်အတွက်အရမ်းကောင်းပါတယ်။ အသစ်စက်စက် LG g3 အသစ်ကိုကျွန်တော်ရပြီ။ တစ်ချက်ပဲ၊ လုပ်ငန်းစဉ်ရဲ့အဆုံးမှာတော့ root ဆုံးရှုံးသွားတယ်။ ဒါကြောင့်နောက်ဆက်တွဲမွမ်းမံမှုများအတွက်သင်0မှစတင်ရမည် Android3ရှိသည့် g7.1.2 ကိုဘယ်လို root လုပ်မလဲ။
ဂျင်မီ gilces ဟုသူကပြောသည်
ကောင်းသောနေ့လည်ခင်း, ဤ update ကိုဖြစ်စဉ်ကိုမူရင်း LG နှင့်သို့မဟုတ် lg မိတ္တူနှင့်အတူသာအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
Jimmy Gilces ကိုပြန်ပြောပါ
Samsung Galaxy Note 8 "Emperor Edition" တွင် 8GB RAM ပါဝင်သည်